VAIA10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 10000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA10000
With the ability to filter pure water with high quality and high capacity, 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System has become the focus of attention of investors and factories specializing in producing bottled water recently.
ရေသန့်ကို အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး များများစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်က ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အရွေးချယ်ဆုံးစက် ဖြစ်လာပါတယ်။
By owning this RO purified water product, you will completely own the quality of the pure water you use, dispel worries about unsecured water sources.RO ရေသန့်ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရေသန့်ရဲ့ ကွာလတီကို စိတ်ချရပြီး လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
Rated by consumers as the No. 1 industrial water purification equipment in Vietnam, 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System will help you create 10,000 liters of purified water meeting QCVN 6-1:2010/BYT standards of the Ministry of Health.
ဗီယက်နမ်မှာ နံပါတ် ၁ ရေစစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်က တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
VAIA10000 is manufactured according to ISO 9001:2015 standards with main components imported and distributed directly by Viet An General Trading Joint Stock Company. Products are exclusive brands VA, USApec number 250969 and 250970 at the Department of Intellectual Property of Vietnam.
VAIA10000 ကို ISO 9001:2015 အတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီပါတယ်။ စက်တွေကို ဗီယက်နမ် မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ UA,USApec ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉၊ ၂၅၀၉၇၀ တို့ ရရှိထားပါတယ်။
If you are looking foralarge capacity industrial water filtration system to serve your production facility, if you are looking to remove toxins from the water to haveaclean water standard, you should not discard it. through this detailed introduction to the 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System.
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကြီးမားတဲ့ ရေစစ်ကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ရေမှ အဆိပ်အတောက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ရေသန့်စံချိန်မီချင်တယ်ဆိုရင် 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
What is the difference between 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System of Viet An
Viet An မှ 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်ရဲ့ ခြားနားချက်က ဘာလဲ
This isasystem designed withaspecial water filtration technology - reverse osmosis water filtration, which is quite different from previous conventional filtration technologies.
အရင်က သာမန် ရေစစ်နည်းပညာတွေနဲ့ မတူဘဲ ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ် နည်းပညာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
The most outstanding feature of this technology is the RO membrane, which is made up of thin films of special materials that are tightly wound together intoaspiral. The size of the filters on the RO membrane is only about 0.0001 micrometres, so only water molecules can pass through this filter.
ဒီနည်းပညာရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာက စပါယ်ရှယ် သေးလွှာတဲ့ ဖလင်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ RO အလွှာပါးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ RO အလွှာပါးပေါ်က ရေစစ်အရွယ်အစားက ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာရှိတာကြောင့် ရေမော်လီကျူးတွေက ရေစစ်ကို ဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Pumping system has the function of creating pressure on the filter system, helping to push water through the filter columns, the filter element
ရေစုပ်စက်မှာ ရေစစ်ပေါ် ဖိအားဖန်တီးတဲ့ လုပ်ငန်းရှိပြီး ရေကို ရေစစ်ကော်လံ၊ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီ ရေကိုတွန်းပို့ရန် ကူညီပေးပါတယ်။
Air disinfection system is used to eliminate bacteria present in the air, helping to createasterile environment.
လေပိုးသတ်မီးအိမ်ကို လေထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးပြီး ပိုးသတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးဖို့ သုံးပါတယ်။
The pre-filter system is used to filter dirt, algae created by the filter and the stainless steel filter element will filter out sediment, mud, moss, and impurities in the source water.
အကြိုရေစစ်ကို ရေစစ်နဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်အစိတ်အပိုင်းမှ ဖန်တီးထားသော အညစ်အကြေးတွေကို စစ်ထုတ်ပေးဖို့ သုံးပါတယ်။
The heavy metal filter system of the filter system consists ofastainless steel filter column, automatic valve, sand and gravel filter used to filter metals in water, filter out alum, impurities, make the water clear and free from brackish.
ကြီးမားသော သတ္တုရေစစ်မှာ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံ၊ အော်တိုအဆို့၊ သဲနဲ့ ရေစစ်တွေ ပါဝင်ပြီး ရေမှ ကျောက်ချဉ်၊ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သန့်စင်ပေးပါတယ်။
Detox filter system, deodorizing fishy smell also includes stainless steel column, filter gravel and automatic valve. There is also activated carbon, which has the main effect in detoxifying and eliminating unpleasant fishy odors present in water.
အဆိပ်အတောက်ရေစစ်က စတိန်းလက်စ်စတီး ကောလံနဲ့ အော်တိုအဆို့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရေထဲမှ အဆိပ်အတောက်တွေ အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ ကာဗွန်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Limestone removal system and water softener with automatic valve, cationic filter and stainless steel filter column. Used to remove limestone precipitated in water, soften the water and help protect the RO filtration system in the next step.
ထုံးကျောက်ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေကို ပျော့စေတဲ့စနစ်မှာ အော်တိုအဆို့၊ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရေထဲမှ ကျောက်ချဉ်ကို ဖယ်ထုတ်ပေးပြီး နောက်တဆင့်တွင် RO ရေစစ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
The RO filtration system in 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System is quite complicated withalot of equipment, including booster pumps, pure RO casings and membranes. There are also flow meters, pressure gauges, oil pressure gauges, electronic valves, reconstituted salt and automatic electronic cabinets.
10000LPH VAIA10000 မှ RO ရေစစ်မှာ အားပြင်းရေစုပ်စက်၊ RO အလွှာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ စီးဆင်းမီတာ၊ ဖိအားတိုင်းကိရိယာ၊ ဆီဖိအားတိုင်းကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်အဆို့၊ ဆားနဲ့ အော်တို လျှပ်စစ်အကန့်တွေ ပါပါတယ်။
The bactericidal killing and filtration system includes UV lamp, Ozone will help filter out all bacteria arising in the process of transferring water from the RO filter system to the storage tank.
ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ပေးသောစက်မှာ UV အလင်းရောင်နဲ့ အိုဇုန်းတို့ ပါဝင်ပြီး ရေကို ရေစစ်မှ တိုင်ကီထဲ ပြောင်းတဲ့အချိန် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
Finally, the bracket and other accessories for the installation of 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System have external support for the system, helping to preserve the system from environmental impacts.
နောက်ဆုံးမှာတော့ 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်မှ ခြင်းနဲ့ အခြားအဆင်တဆာတွေက စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
Filtration system specifications
Product's name: 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System
ပစ္စည်းအမည်- 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀၀ လီတာ
ပါဝါစားခြင်း-တစ်နာရီတွင် ၁၁.၅ ကီလိုဝပ်
Quotations of 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System
10000LPH VAIA 10000 ရေစစ်၏ လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်
Currently on the market there are many units providing industrial water purification products in which Viet An is the most prominent brand. With nearly 20 years of experience in the water industry, where the best Vietnamese experts in water treatment are gathered, Viet An is proud to bring to all customers high quality products at the most reasonable prices. With only spending about VND 857 million, customers will be able to own 10000LPH VAIA10000 Purified Water Filtration System using this autovan stainless steel filter column.
ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာ ရေစစ်တွေမျိုးစုံရှိပေမယ့် Viet An က အကောင်းဆုံး တံဆိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ နီးပါး ရပ်တည်လာတဲ့အတွက် Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးနဲ့ သင့်တော်သောဈေးနှုန်းရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပေးစွမ်းနေပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၈၅၇ လောက်နဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုရေစစ်ကောလံကို အသုံးပြုထားတဲ့ 10000LPH VAIA10000 ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
Besides high quality products, Viet An is also highly appreciated by its professional, dedicated and prompt after-sales service withateam of 24/7 support consultants and technicians. Therefore, Viet An is always highly appreciated by both consumers and water experts.
အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအပြင် Viet An မှ နည်းပညာရှင်တွေမှ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An ကို ဝယ်ယူသူတွေကရော ပညာရှင်တွေကပါ အသိအမှတ်ပြုကြတာ ဖြစ်တယ်။
With2factories,4branches nationwide, customers can completely choose water purification products to serve their needs. Immediately access the website: https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc or call hotline 0949 414141 for detailed product advice and attractive promotions.
နိုင်ငံအနှံ့ စက်ရုံ ၂ ခု၊ ရုံးခွဲ ၄ ခု ရှိတာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေက ရေစစ်တွေကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိဖို့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင်လည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
1. VAQGF600 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine
VAQGF600 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine isahigh-capacity machine suitable for 20L pure water bottling manufacturers. Daily capacity can be up to 600 5G bottles per hour. Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine isahigh-capacity machine suitable for 20L pure water bottling manufacturers. Daily capacity can be up to 600 5G bottle per hour. The machine applies the most advanced technology of the United States and is made according to ISO: 9001- 9001 standard. It is manufactured, imported and distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company and exported to ASEAN countries.
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 က လုပ်ဆောင်မှု မြင့်မားပါတဲ့ စက်ဖြစ်ပြီး ၂၀ လီတာ ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီမှာ ပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ အထိ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ဟာ U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေဆီ တင်သွင်းဖြန့်ချီပါတယ်။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ် 10 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ 10 unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါ6းunit Hitech-USA/CSM Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ်4unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်3unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်7unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 10000LPH VAIA10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်